Ighlọ ọrụ na-atụle usoro ntanetị - China na-atụle ndị na-emepụta sistemụ, ndị na-eweta ya
JJ – LPK500 Flow itule batcher
Ihe e ji mara ihe ebe nchekwa mgbazi technology
oke nkenke nke ihe eji eme ya
JJ-LIW Loss-Na-arọ arọ
LIW usoro ọnwụ-na-ibu eruba metering feeder bụ a elu-edu metering feeder mere maka usoro ụlọ ọrụ. Ọ na ọtụtụ-eji maka na-aga n'ihu mgbe nile eruba batching akara na kpọmkwem ogbe akara usoro nke granular, ntụ ntụ, na mmiri mmiri ihe na ulo oru saịtị dị ka roba na plastik, chemical ụlọ ọrụ, nkà mmụta banyere ígwè, nri, na ọka oriri. LIW usoro ọnwụ-na-ibu eru eru metering feeder bụ a elu-nkenke nri usoro e mere site mechatronics. Ọ nwere nri dịgasị iche iche nwere ike izute ọtụtụ ngwa. Usoro ahụ dum ziri ezi, nke a pụrụ ịtụkwasị obi, dị mfe ịrụ ọrụ, dị mfe iji zukọta ma debe ya, ma dị mfe iji. Dị usoro LIW na-ekpuchi 0,5～22000L / H.
JJ-CKW30 Ọsọ ọsọ Dynamic Checkweigher
CKW30 nnukwu ọsọ na-enyocha ike na-ejikọ teknụzụ ngwa ngwa ngwa ngwa, teknụzụ na-enweghị mkpọtụ ọsọ ọsọ, yana teknụzụ mechatronics mmepụta njikwa, na-eme ka ọ dabara maka njirimara ọsọ ọsọ，nhazi, na onu ogugu nke ihe ndi n'agbata gram 100 na kilogram 50, nchoputa nchoputa nwere ike iru g 0.5g. A na-eji ngwaahịa a eme ihe na mmepụta nke obere ngwugwu na ọtụtụ ngwaahịa dị ka kemịkalụ kwa ụbọchị, kemịkal mara mma, nri, na ihe ọveraụveraụ. Ọ bụ nyocha akụ na ụba na arụmọrụ dị oke ọnụ.
JJ-LIW BC500FD-Ex Usoro Mmasị
The BC500FD-Ex sistemụ sistemụ bụ ngwe njikwa njikwa na-erikpu nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara dabere na njirimara nke njikwa njikwa ọrụ. Dripping bụ a nnọọ nkịtị nri usoro ke chemical ụlọ ọrụ, ke ofụri ofụri, otu ma ọ bụ karịa ihe na-nwayọọ nwayọọ kwukwara n'ime chernobyl n'ime a kpọmkwem oge dị ka ibu na ọnụego chọrọ site na usoro, na-eme ka mmeghachi omume na ndị ọzọ na proportioned ihe na-emepụta ihe achọrọ.
Bọmbụ gbawara agbawa na-egosi: Exd【ib IIC】IIB T6 Gb
JJ-CKJ100 ala-iche iche eweli Checkweigher
The CKJ100 usoro na-eweli ala checkweigher adabara maka mbukota na-erikpu ego nke dum igbe nke ngwaahịa mgbe n'okpuru nlekọta. Mgbe ihe dị arọ ma ọ bụ buru oke ibu, enwere ike ịbawanye ma ọ bụ belata n'oge ọ bụla. Usoro a nke ngwaahịa ịmụta patented imewe nke nkewa nke ọnụ ọgụgụ ahụ na ala table, nke na-ewepu mmetụta na ele mmadụ anya n'ihu ibu mmetụta na ọnụ ọgụgụ ahụ mgbe dum igbe na-ntukwasi na na anya, na nke ukwuu mma mmesie agbanwe agbanwe na ntụkwasị obi nke igwe dum. Ngwaahịa , wdg Industry si mbukota mmepụta akara.
Akara Calibration Weight, Shear Bead Ibu Ibu, Akwụkwọ Akara Asambodo, Mmezi arọ Set, Mmezi Mass, Mmezi arọ N'ihi Digital Akara,